Xoogagga Kenya oo soo furtay dhallinyaro Keenyaan ah - صحف نت
english اليمن العربي الثلاثاء 01 مايو 2018 02:58 مساءً تبليغ حذف
صحف نت - Ciidanka Militariga dalka Kenya ayaa ka soo furteen Xarakada Al-shabaab 13 dhalinyaro Kenyan ah kuwaas oo tababaro ay ku siinayeen degaanka Raas Kambooni ee Gobolka Jubbada Hoose.
Da'yartaan oo markii horeba ka tagay dalka Kenya ayaa xiriir la soo sameeyay Millitariga dalka Kenya ee ku sugan Gobolka Jubbada Hoose, waxayna askartu ku guuleysteen iney soo furtaan iyagoo bad qaba, ugu dambeynna waxa loo duuliyay Gobolka Xeebta ee Kenya.
Dhalinyaradan oo da’dooda ay u dhaxeysay 18 ilaa 34 ayaa ururka Al-shabaab waxay tababaro ku siinayeen degaanka Raas Kambooni oo ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose, koofurta Soomaaliya.
“Laamaha ammaanka ayaa xog wareysi ka qaadaya dhalinyarada, sidoo kale waxay ogaanayaan talo bixinta la siin karo, tiro badan oo dhalinyaro ah kuna biiray Shabaab ayaa dalka dib ugu soo laabanaya, waxaana ballan qaadeynaa inaan waxba la yeeli doonin dhalinyaradan.” ayuu yiri af-hayeen u hadlay Ciidanka Booliska Kenya.
Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa ku biira sanad kasta dhalinyaro badan oo Kenyan ah kuwaas oo weeraro ka geysta gudaha dalka Kenya, dhowaan ayay ciidamada Kenya waxa ay gacanta ku dhigeen saddex dhalinyaro Kenyan ah kuwaas oo qorsheynayay inay weeraro ka geystaan magaalada Nairobi ee xaruunta Keenya.
"بإمكانكم إيضاً مطالعة خبر (Xoogagga Kenya oo soo furtay dhallinyaro Keenyaan ah - صحف نت) من موقع (اليمن العربي)"